family life, Author at Myanmar Family Life » Page7of 1505
ဖခင်ကြီးရဲ့ အုတ်ဂူလေးဆီသွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကုသိုလ်ယူနေတဲ့ ချစ်ချစ်ဇော်
ဒါရိုက်တာ မိုက်တီး၊ ချစ်ချစ်ဇော်၊ လင်းဇာနည်ဇော်တို့ မောင်နှမတတွေဟာဆိုရင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေနဲ့ လေးစားချစ်ခင်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်နှမအချင်းချင်း ရိုသေလေးစားမှုရှိခဲ့ကြသလို မိဘအပေါ်မှာလည်း ဘုရားတစ်ဆူ၊ ဂူတစ်လုံးတဖွယ် ကိုးကွယ်အားထားခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ကြီး ဦးခင်ဇော် နှစ်ရှည်ကြာ နာမကျန်းဖြစ်နေချိန်မှာလည်း မငြိုမငြင်ဘဲ ကလေးတစ်ယောက်လို ပြုစုစောင့်ရှောက် ပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင်ကြီးကို အရမ်းချစ်ခင်ပြီး ပြုစုယုယပေးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်ချစ်ဇော်တို့ မောင်နှမတတွေဟာဆိုရင် ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ရင်ထုမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ကြီး ဒါရိုက်တာ ဦးခင်ဇော်ဟာဆိုရင် ၃ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်မှာ ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်းကွယ်လွန် ဆုံးပါးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ကြီးရဲ့ ဈပနကိုတော့ ၇ရက်နေ့ ရေဝေးသုဿန်မှာ မီးသင်္ဂြန်ပြီး ဂူသွင်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင်ကြီး ကွန်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှစ ယနေ့အချိန်အထိ ဖခင်ကြီးကို မေ့မရနိုင်ခဲ့သေးတဲ့ ချစ်ချစ်ဇော်ကတော့ ဖခင်ကြီးရဲ့ အတိတ်ကအကြောင်း တစေ့တဇောင်းကိုလည်း မကြာသေးခင်ကမှ ပြောပြထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ ချစ်ချစ်ဇော်တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးက ဖခင်ကြီး ဦးခင်ဇော်ရဲ့ အုတ်ဂူလေးဆီသွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ် ကုသိုလ်ယူခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင်ကြီးရဲ့ အုတ်ဂူလေးဆီ သန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်ရင်း ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်ဆွေဦး(မေဦး) နဲ့ ဦးမင်းနောင်(ဂန္တဝင်တေးသံရှင်)တို့ရဲ့ အုတ်ဂူလေးတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်ဂါရဝပြု ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ချစ်ချစ်ဇော်ကတော့ ” ဒီနေ့ အဖိုးလေးဆီသွားရင်း၊ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်ဆွေဦး(မေဦး) နဲ့ အန်ကယ် ဦးမင်းနောင်(ဂန္တဝင်တေးသံရှင်)တို့ရဲ့ အုတ်ဂူလေးတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်ဂါရဝပြု ကုသိုလ်ယူ…… ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ရေးသားဖော်ပြပေးထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖခင်ကြီးရဲ့ အသက် ၉၁ ကြာခဲ့သည့်တိုင်အောင် ပြုစုပေးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်ချစ်ဇော်တို့ မောင်နှမတွေအဖို့ ယခုအချိန်မှာတော့ ဝမ်းနည်းကျေကွဲမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ကြီးအတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ လုပ်ပေးရင်း ဖခင်ကြီးရဲ့ အုတ်ဂူလေးဆီိမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ် ကုသိုလ်ယူရင်း ရိုသေစွာ ဂါရဝပြုခဲ့တဲ့ ချစ်ချစ်ဇော်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပြီး အားပေးသွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ ဖခင်ကြီးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ချစ်ဇော်တို့ မောင်နှမတတွေရဲ့ စိတ်သဘောထားက အရမ်းကို လေးစားအတုယူစရာ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြပါသော ချစ်ပရိသတ်များအပေါင်းကို မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Ref : Chit Chit Zaw’s Facebook
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့မှာ လောင်းကစား ဥပဒေ ကို အသစ် ပြဌာန်းလိုက်တာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ အဆိုပါ ဥပဒေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေ အများကြီး ပါလာပါတယ် ။
နံပါတ် (၁) အချက်ကတော့
ပုဒ်မ ၄ (က) နှင့် ၆ (က) မှာ ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်) ကျေးရွှာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက လောင်းကစားနေသူ (သို့မဟုတ်) လောင်းကစားအိမ်ကို ဝရမ်းမပါဘဲ ဖမ်းဆီးခွင့် ရှိသည် ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်အရဆိုလျင် လောင်းကစားနေသူများ အနေဖြင့် ယခင်ကဆိုလျင် ရပ်ကွက်ထဲ ရွှာထဲ ရဲလာမှသာ သတိထားရမည့်အနေအထားမဟုတ်တော့ဘဲ မိမိတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုးကပင် ဖမ်းဆီးခွင့်ရှိနေပြီဆိုတာ သတိပြုရတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လောင်းကစားမှု့အတွက် နေရာ ကျဉ်းမြောင်းသွားပီဆိုတာ သတိပြုစေလိုပါတယ်။
နံပါတ် (၂) အချက်ကတော့
အဆိုပါဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ (၂၅) မှာ လောင်းကစားမှု့ မှ သိမ်းဆည်းရမိငွေ နဲ့ ဖမ်းမိသည့် လောင်းကစား ပစ္စည်း ရောင်းရငွေ အနက်မှ သတင်းပေးသူကို ၁၀ % နဲ့ ဖမ်းဆီး ရာတွင်ပါဝင်သူကို ၂၀ % ဆုချီးမြင့်မည် ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်အရ ဆိုလျင် လောင်းကစားဝိုင်း ရှိကြောင်း သတင်းပေးလိုက်ယုံဖြင့် သတင်းပေးသူသည် အဆိုပါ လောင်းကစားဝိုင်းအမှု့ နှင့် ဆက်စပ်သော ငွေ နှင့် ပစ္စည်း ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် အမိန့်ချမှတ်သည့် အခါတွင် လောင်းကစား ငွေနှင့် ပစ္စည်းရောင်းရငွေ အနက်မှ ၁၀ % ကို ဆုငွေ အဖြစ် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ဒီတော့ ဥပမာအနေဖြင့် လောင်းကစားငွေ နဲ့ လောင်းကစားသည့်ပစ္စည်းရဲ့ တန်ဖိုးသည် သိန်း ၁၀၀ ဆိုပါက သတင်းပေးသူအနေဖြင့် ၁၀ သိန်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်အနေအထားအရ လူတိုင်း လက်ကိုင်ဖုန်း များ ကိုင်နိုင်သည်ဖြစ်၍သတင်းပေးသူအနေဖြင့် လူကိုယ် တိုင် ရဲစခန်းသို့သွားရောက်ရန် မလိုပဲ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် သတင်းပေးနိုင်သည်ဖြစ်၍ လောင်းကစားပြုလုပ်မည့်သူများ အနေဖြင့် အချိန်မရွှေးဖမ်းဆီးခံရနိုင် သည်ကို သတိပြုရန်လို ပါလိမ့်မည်။
( လောင်းကစားပုဒ်မ ၇ (ခ) (၁) တွင်သတင်း ပေးသူကို လျို့ဝှက်ထားရန် ပြဌာန်းထားသည်ဖြစ်၍ သတင်းပေးသူ အား အလွယ်တကူမသိရှိနိုင်ပါ)ထို့ပြင် ဖမ်းဆီးရာတွင်ပါဝင်သူကို ၂၀ % ဆု ချီး မြင့်မည်ဟု ပြဌာန်းထားသည့်အတွက် ဖမ်းဆီးရာတွင် ပါဝင် သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးများ ။ အသိသက်သေ များသည်လည်း ယခင်ကဲ့သို့ အခမဲ့ လူမုန်းခံဘဝမှ ဆုငွေရရှိလာပေတော့မည်။၂၀ % ဖြစ်၍ သိန်း ၁၀၀ တန်လောင်း ကစားမှု့ကို ဖမ်းနိုင်လျင် ၂၀ % ကို ခွဲဝေရှိတော့မည် ဖြစ် သည့်အတွက် ယခင်ကလို မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်တော့ မည် မဟုတ်သည်ကို လောင်းကစားသူများ အနေဖြင့် သိရှိထားရန်လိုပါသည်။
နံပါတ် (၃) အချက်ကတော့
ယနေ့တင်ပြသည့် ပိုစ့်၏ ခေါင်းစဉ်ပါ အကြောင်း အရာဖြစ်ပါသည် ။လောင်းကစားဥပဒေပုဒ်မ (၁၄) တွင် “မည်သူမျ လောင်းကစားရန် ငွေချေးခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးထောက် ပံ့ခြင်း မပြုလုပ်ရ” ဆိုသည့်အချက် နှင့် လောင်းကစားဥပဒေပုဒ်မ (၂၀) (က) တွင် ” ပုဒ်မ ၁၄ ပါ ပြဌာန်းချက်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု့ထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ်ထိထောင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်အပြင် အနည်းဆုံး ကျပ် ၁ သိန်း မှ အများဆုံး ကျပ် ၅ သိန်းအထိ ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည် ။ပြစ်မှု့ နှင့် အကျုံးဝင်သော ငွေကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်း ခြင်းခံရမည် ” ဟု ပြဌာန်းထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ငွေရှင် အနေဖြင့် ငွေချေးမည်ဆိုပါက ငွေလာချေးသူ သည် မည်သည့်အတွက်ငွေချေးခြင်းဖြစ် သည်ကို တိတိကျကျ စုံစမ်းရမည်ဖြစ်သည် ။ သမာအာဇီဝလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် အတွက်မဟုတ်ဘဲ လောင်းကစားပြုလုပ်ရန်အတွက် ငွေချေးသည် ကို ငွေရှင်အနေဖြင့် သိသိလျက် နှင့် ချေးငှားမိပါက ပုဒ်မ ၁၄ ကို ကျူးလွန်ရာရောက်ပါသည် ။အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ပုဒ်မ ၁၄ ကို ကျူးလွန်သည့်အတွက် ပုဒ်မ ၂၀ အရ ငွေချေးငှားပေးသူ ငွေရှင်သည် ထောင် ဒဏ် ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ်ထိအပြင် ငွေဒဏ် ၁ သိန်း မှ ၅ သိန်း ထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ပါသည် ။ ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပတ် ဆိုသည့် အတိုင်း ဖြစ်သွားပါမည် ။
ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ် ထောင်နန်းစံရနိုင်သည်ကို ငွေချေးငှားမည့် ငွေရှင်များ သတိကြီးစွာထားရန်လို ပါသည် ။ ထို့ပြင် အဆိုပါပုဒ်မ ၂၀ တွင် ငွေကို ပြည် သူ့ဘဏ္ဍာ အဖြစ် သိမ်းဆည်းသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် ပြန်ရနိုင်ရန်မရှိတော့သည်ကိုလည်း ထပ်မံသိထားသင့်ပါသည် ။သို့ဖြစ်ပါ၍ အတိုးရသည်ကို မမက်မောဘဲ လောင်းကစားဥပဒေသစ်ကို သတိပြုရန် လိုပါကြောင်း အသိပေး သတိပေးတင်ပြလိုက်ပါသည်။
Credit-စာချုပ်ရှေ့နေ ( U Aung Zay Ya)
၂၀၁၉ ခုနှဈ မလေ ရ ရကျနမှေ့ာ လောငျးကစား ဥပဒေ ကို အသဈ ပွဌာနျးလိုကျတာ အားလုံးသိပွီးဖွဈပါလိမျ့မယျ ။ အဆိုပါ ဥပဒမှော စိတျဝငျစားစရာအခကျြတှေ အမြားကွီး ပါလာပါတယျ ။
နံပါတျ (၁) အခကျြကတော့
ပုဒျမ ၄ (က) နှငျ့ ၆ (က) မှာ ရပျကှကျ(သို့မဟုတျ) ကြေးရှာအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှုးက လောငျးကစားနသေူ (သို့မဟုတျ) လောငျးကစားအိမျကို ဝရမျးမပါဘဲ ဖမျးဆီးခှငျ့ ရှိသညျ ဆိုသညျ့အခကျြဖွဈပါတယျ။ဒီအခကျြအရဆိုလငျြ လောငျးကစားနသေူမြား အနဖွေငျ့ ယခငျကဆိုလငျြ ရပျကှကျထဲ ရှာထဲ ရဲလာမှသာ သတိထားရမညျ့အနအေထားမဟုတျတော့ဘဲ မိမိတို့ရဲ့အုပျခြုပျရေးမှုးကပငျ ဖမျးဆီးခှငျ့ရှိနပွေီဆိုတာ သတိပွုရတော့ မှာ ဖွဈပါတယျ ။ လောငျးကစားမှု့အတှကျ နရော ကဉျြးမွောငျးသှားပီဆိုတာ သတိပွုစလေိုပါတယျ။
နံပါတျ (၂) အခကျြကတော့
အဆိုပါဥပဒရေဲ့ ပုဒျမ (၂၅) မှာ လောငျးကစားမှု့ မှ သိမျးဆညျးရမိငှေ နဲ့ ဖမျးမိသညျ့ လောငျးကစား ပစ်စညျး ရောငျးရငှေ အနကျမှ သတငျးပေးသူကို ၁၀ % နဲ့ ဖမျးဆီး ရာတှငျပါဝငျသူကို ၂၀ % ဆုခြီးမွငျ့မညျ ဆိုသညျ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ဒီအခကျြအရ ဆိုလငျြ လောငျးကစားဝိုငျး ရှိကွောငျး သတငျးပေးလိုကျယုံဖွငျ့ သတငျးပေးသူသညျ အဆိုပါ လောငျးကစားဝိုငျးအမှု့ နှငျ့ ဆကျစပျသော ငှေ နှငျ့ ပစ်စညျး ကို ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာအဖွဈ အမိနျ့ခမြှတျသညျ့ အခါတှငျ လောငျးကစား ငှနှေငျ့ ပစ်စညျးရောငျးရငှေ အနကျမှ ၁၀ % ကို ဆုငှေ အဖွဈ ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ ။ဒီတော့ ဥပမာအနဖွေငျ့ လောငျးကစားငှေ နဲ့ လောငျးကစားသညျ့ပစ်စညျးရဲ့ တနျဖိုးသညျ သိနျး ၁၀၀ ဆိုပါက သတငျးပေးသူအနဖွေငျ့ ၁၀ သိနျး ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ယနခေ့တျေအနအေထားအရ လူတိုငျး လကျကိုငျဖုနျး မြား ကိုငျနိုငျသညျဖွဈ၍သတငျးပေးသူအနဖွေငျ့ လူကိုယျ တိုငျ ရဲစခနျးသို့သှားရောကျရနျ မလိုပဲ ဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျ သတငျးပေးနိုငျသညျဖွဈ၍ လောငျးကစားပွုလုပျမညျ့သူမြား အနဖွေငျ့ အခြိနျမရှေးဖမျးဆီးခံရနိုငျ သညျကို သတိပွုရနျလို ပါလိမျ့မညျ။
( လောငျးကစားပုဒျမ ရ (ခ) (၁) တှငျသတငျး ပေးသူကို လြို့ဝှကျထားရနျ ပွဌာနျးထားသညျဖွဈ၍ သတငျးပေးသူ အား အလှယျတကူမသိရှိနိုငျပါ)ထို့ပွငျ ဖမျးဆီးရာတှငျပါဝငျသူကို ၂၀ % ဆု ခြီး မွငျ့မညျဟု ပွဌာနျးထားသညျ့အတှကျ ဖမျးဆီးရာတှငျ ပါဝငျ သညျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား ။ အုပျခြုပျရေးမှုးမြား ။ အသိသကျသေ မြားသညျလညျး ယခငျကဲ့သို့ အခမဲ့ လူမုနျးခံဘဝမှ ဆုငှရေရှိလာပတေော့မညျ။၂၀ % ဖွဈ၍ သိနျး ၁၀၀ တနျလောငျး ကစားမှု့ကို ဖမျးနိုငျလငျြ ၂၀ % ကို ခှဲဝရှေိတော့မညျ ဖွဈ သညျ့အတှကျ ယခငျကလို မမွငျခငျြယောငျ ဆောငျတော့ မညျ မဟုတျသညျကို လောငျးကစားသူမြား အနဖွေငျ့ သိရှိထားရနျလိုပါသညျ။
နံပါတျ (၃) အခကျြကတော့
ယနတေ့ငျပွသညျ့ ပိုဈ့၏ ခေါငျးစဉျပါ အကွောငျး အရာဖွဈပါသညျ ။လောငျးကစားဥပဒပေုဒျမ (၁၄) တှငျ “မညျသူမြ လောငျးကစားရနျ ငှခြေေးခွငျး သို့မဟုတျ ငှကွေေးထောကျ ပံ့ခွငျး မပွုလုပျရ” ဆိုသညျ့အခကျြ နှငျ့ လောငျးကစားဥပဒပေုဒျမ (၂၀) (က) တှငျ ” ပုဒျမ ၁၄ ပါ ပွဌာနျးခကျြကို ကြူးလှနျကွောငျး ပွဈမှု့ထငျရှား စီရငျခွငျး ခံရလငျြ ထိုသူကို အနညျးဆုံး ၁ နှဈမှ ၃ နှဈထိထောငျဒဏျ ခမြှတျရမညျ့အပွငျ အနညျးဆုံး ကပျြ ၁ သိနျး မှ အမြားဆုံး ကပျြ ၅ သိနျးအထိ ငှဒေဏျခမြှတျနိုငျသညျ ။ပွဈမှု့ နှငျ့ အကြုံးဝငျသော ငှကေို ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာအဖွဈ သိမျးဆညျး ခွငျးခံရမညျ ” ဟု ပွဌာနျးထားပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ငှရှေငျ အနဖွေငျ့ ငှခြေေးမညျဆိုပါက ငှလောခြေးသူ သညျ မညျသညျ့အတှကျငှခြေေးခွငျးဖွဈ သညျကို တိတိကကြ စုံစမျးရမညျဖွဈသညျ ။ သမာအာဇီဝလုပျငနျး လုပျကိုငျရနျ အတှကျမဟုတျဘဲ လောငျးကစားပွုလုပျရနျအတှကျ ငှခြေေးသညျ ကို ငှရှေငျအနဖွေငျ့ သိသိလကျြ နှငျ့ ခြေးငှားမိပါက ပုဒျမ ၁၄ ကို ကြူးလှနျရာရောကျပါသညျ ။အကြိုးဆကျအနဖွေငျ့ ပုဒျမ ၁၄ ကို ကြူးလှနျသညျ့အတှကျ ပုဒျမ ၂၀ အရ ငှခြေေးငှားပေးသူ ငှရှေငျသညျ ထောငျ ဒဏျ ၁ နှဈမှ ၃ နှဈထိအပွငျ ငှဒေဏျ ၁ သိနျး မှ ၅ သိနျး ထိ ခမြှတျခံရနိုငျပါသညျ ။ ကိုယျ့ရှုးကိုယျပတျ ဆိုသညျ့ အတိုငျး ဖွဈသှားပါမညျ ။
ကိုယျ့ငှနေဲ့ကိုယျ ထောငျနနျးစံရနိုငျသညျကို ငှခြေေးငှားမညျ့ ငှရှေငျမြား သတိကွီးစှာထားရနျလို ပါသညျ ။ ထို့ပွငျ အဆိုပါပုဒျမ ၂၀ တှငျ ငှကေို ပွညျ သူ့ဘဏ်ဍာ အဖွဈ သိမျးဆညျးသှားမညျဖွဈသဖွငျ့ ပွနျရနိုငျရနျမရှိတော့သညျကိုလညျး ထပျမံသိထားသငျ့ပါသညျ ။သို့ဖွဈပါ၍ အတိုးရသညျကို မမကျမောဘဲ လောငျးကစားဥပဒသေဈကို သတိပွုရနျ လိုပါကွောငျး အသိပေး သတိပေးတငျပွလိုကျပါသညျ။
Credit-စာခြုပျရှနေ့ေ ( U Aung Zay Ya)
“ကလေးက ည ၂ နာရီလောက်မှာ ရုတ်တရက်ထထိုင်ပီးတော့ ကယောင်ကတမ်းတွေပြောနေလို့ဆိုပီး ဆေးရုံရောက်လာတယ် …”
ကလေးက ည ၂ နာရီလောက်မှာ ရုတ်တရက်ထထိုင်ပီးတော့ ကယောင်ကတမ်းတွေပြောနေလို့ဆိုပီး ဆေးရုံရောက်လာတယ် …ရောက်လာတဲ့ချိန်က မနက် ၁၀ နာရီကျော်လောက် …ပျို့အန်နေတယ် … အဖျားရှိတယ်.. မျက်လုံးပြူးပီး တဆတ်ဆတ်နဲ့တုန်ပီး ကယောင်ကတမ်းပြောနေတယ် … သွားရည်တွေလဲကျနေတယ် …
သူတို့ကတော့ အပမှီတာ လိုလို စုန်းကိုင်တာလိုလို ပြောနေကြတယ် …အရင်က ဘာရောဂါမှ မဖြစ်ဖူးသလို ဆေးရုံ ဆေးခန်းတောင်မှ မပြရလောက်အောင် မာ တဲ့ ကလေး …တဲ့ …ကျတော် အားလုံး စမ်းသပ်ကြည့်တော့ စိတ်ထဲ မဟုတ်သေးပါဘူး … ထင်နေတာတစ်ခု သေချာမေးကြည့်အုံးမှဆိုပီး မေးကြည့်တယ် … ” ကလေးက အရင်က ခွေးတို့ကြောင်တို့ ကိုက်ခံရဖူးလားဗျ ?”
“ကိုက်ခံရဖူးတယ်လေ .. ပီးခဲ့တဲ့လက …အိမ်ခွေးပါ … ဘာမှမဖြစ်ဘူး … ခွေးရူး မဟုတ်ဘူး… ” တဲ့ …ေ့ဖြပုံကတော့ ခပ်မာမာ ..
“အဲ့တုန်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးလား ?”
“အာ … အိမ်ခွေးပါဆို .. ထိုးစရာလိုလို့လား ..? ပီးတော့ အဲ့တုန်းက မအားဘူး ဘယ်သူမှ ”
ခုနကထက် အသံကမာလာတယ် …
ဒါဆို အဲ့ အိမ်ခွေးကကော ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထိုးထားလား …ဆိုတော့..“မထိုးထားပါဘူး “တဲ့ …ခု အဲ့ခွေးကော ဆိုတော့ .. အဲ့ကိုက်တဲ့နေ့ကတည်းက မောင်းထုတ်လိုက်တာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိပါဘူး .. တဲ့ …History နဲ့ Examination အရတော့ ကျတော့် Diagnosis ကတော့ Rabies (ခွေးရူးပြန်ရောဂါ) ပါပဲ …
ဒါနဲ့ပဲ သူတို့ကို ရောဂါအကြောင်း သေချာရှင်းပြတယ် … လက်မခံချင်သလိုလို ပုံစံပါပဲ …လိုအပ်တဲ့ထိုးဆေး သောက်ဆေးတွေပေးပီး ဆေးရုံတင်ထားလိုက်တယ် … သေချာလဲ monitoring လုပ်ထားတယ် …
ညနေ ဆေးထိုးပီး နာရီဝက်ကျော်အကြာမှာ ကလေးက ထဖောက်လာတယ်ဆိုပီး စောတဒ တက်ပါလေရော ….. ( အမှန်တော့ ဆေးနဲ့မဆိုင်ပဲ ရောဂါအရ ထဖောက်တာမျိုး )
ချက်ချင်း သွားကြည့်တော့ ကလေးက Gasping ရနေပီ … Resuscitation (သက်ကယ်) လုပ်ပေမယ့် နာရီဝက်ကျော် ကြာတဲ့ထိ ပြန်ကောင်းမလာတော့ပါဘူး …နောက်ဆုံး Expired (ဆုံး) သွားတယ် …အဲ့မှာ စပြသနာ ရှာတော့တာပဲ …
ကလေး အမေက သူ့ကလေးကို သူနာပြုဆရာမတွေက ဆေးထိုးသတ်ပသ်ပါတယ်ဆိုပီး တဆေးရုံလုံး ကြားအောင် ထပ်ခါထပ်ခါ အော်ပီး ငိုပါလေရော …
ခွေးကိုက်တုန်းက ခွေးရူးကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ မအားဘူးဆိုတဲ့သူတွေဆီက လူအယောက် ၂၀ လောက်ရောက်လာတယ် ..တုတ်တွေတောင်ပါတယ် …ကလေးကို ဆေးထိုးသတ်တာ .. ကလေးကို ဆေးထိုးသတ်တာ …အသံတွေ ပဲ့တင်ထပ်နေတယ် …
ဆရာမလေးတွေခမျာ ကြောက်လို့ မျက်ရည်တွေတောင်ကျတယ် …အခန်းထဲ ပြေးဝင်ကြတယ် …ခုနက လူတွေက ကျတော့်ဆီကို ဝိုင်းလာတယ် … ပူလို့ချွေးထွက်တာရော .. ခုနက သူတို့ကလေးကို CPR နာရီဝက်ကျော်လုပ်ပေးထားတာရောနဲ့ လူက ချွေးတွေ ရွှဲနေပီးသား … သူတို့အဲ့လို ဝိုင်းလာတော့ ပိုဆိုး .. ရေချိုးထားသလား မှတ်ရတယ် …ဆေးထိုးတဲ့ ဆရာမကို ထုတ်ပေး … အဲ့ဆရာမ ကျတော်တို့ကလေးကို သတ်တာတဲ့ …
ကျတော်လဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းပြောတယ် … ဒါက ဆေး နဲ့ မဆိုင်ကြောင်း …ကလေးမှာ ဆေးမတည့်တဲ့ လက္ခဏာတွေ တစ်ခုမှ မရှိကြောင်း…ပီးတော့ အဓိက ဒီဆေးတွေ ထိုးခိုင်းသောက်ခိုင်းတာဟာ ကျတော်ပဲဖြစ်ပီး ဆရာမနဲ့ လုံးဝမဆိုင်ကြောင်း … ကလေးက
ခွေးရူးရောဂါကြောင့်သာ ဒီလိုဖြစ်ရကြောင်း အကြိမ်ကြိမ်ရှင်းပြမှ အနည်းငယ် ငြိမ်သွားတယ် … ဒါတောင် အဲ့ လူုအုပ်ထဲကတောက်တခေါက်ခေါက်အသံတွေ … အဓိပ္ပာယ်ကို မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရတုန်း …နောက်တော့ ရွာက ဘုန်းကြီးတွေပါရောက်လာတယ် … ကံကောင်းတာက ဘုန်းကြီးတွေ ပြသနာ လာရှာတာမဟုတ်ပဲ လာတရားချပေးတာမို့ အခြေအနေ တော်တော်တည်ငြိမ်သွားတယ် …ကလေးရဲ့အမေကတော့ သူ့သမီးကို ဆရာမက ဆေးထိုးသတ်ပါတယ်ဆိုပီး တဖွဖွ …ကျတော်လဲ လုပ်စရာရှိတာတွေဆက်လုပ် … နောက် လူနာတစ်ယောက်(ကိုယ်ဝန် ၅ လ နဲ့ အဆိပ် သောက်
သေတဲ့လူနာ )ကို ထပ်ကြည့်ပေးနေရတာမို့ သူုတို့တွေဘယ်အချိန် ပြန်သွားကြမှန်းတော့ မသိလိုက်ဘူး …စိတ်ထဲမှာတော့တွေးမိတယ် …ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ ပုံပြင် too much knowledge maketh fools ကမှတော်သေးတယ် …a little knowledge ကမှ တကယ့်ကို ကြောက်စရာ ဆိုတာပါပဲ …(အိမ်ခွေးကိုက်ကိုက် ကြောင်ကိုက်ကိုက် ၂၄ နာရီအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးကြပါဗျာ )
ကလေးက ည ၂ နာရီလောကျမှာ ရုတျတရကျထထိုငျပီးတော့ ကယောငျကတမျးတှပွေောနလေို့ဆိုပီး ဆေးရုံရောကျလာတယျ …ရောကျလာတဲ့ခြိနျက မနကျ ၁၀ နာရီကြျောလောကျ …ပြို့အနျနတေယျ … အဖြားရှိတယျ.. မကျြလုံးပွူးပီး တဆတျဆတျနဲ့တုနျပီး ကယောငျကတမျးပွောနတေယျ … သှားရညျတှလေဲကနြတေယျ …
သူတို့ကတော့ အပမှီတာ လိုလို စုနျးကိုငျတာလိုလို ပွောနကွေတယျ …အရငျက ဘာရောဂါမှ မဖွဈဖူးသလို ဆေးရုံ ဆေးခနျးတောငျမှ မပွရလောကျအောငျ မာ တဲ့ ကလေး …တဲ့ …ကတြျော အားလုံး စမျးသပျကွညျ့တော့ စိတျထဲ မဟုတျသေးပါဘူး … ထငျနတောတဈခု သခြောမေးကွညျ့အုံးမှဆိုပီး မေးကွညျ့တယျ … ” ကလေးက အရငျက ခှေးတို့ကွောငျတို့ ကိုကျခံရဖူးလားဗြ ?”
“ကိုကျခံရဖူးတယျလေ .. ပီးခဲ့တဲ့လက …အိမျခှေးပါ … ဘာမှမဖွဈဘူး … ခှေးရူး မဟုတျဘူး… ” တဲ့ … ဖွေ့ပုံကတော့ ခပျမာမာ ..
“အဲ့တုနျးက ကာကှယျဆေးထိုးလား ?”
“အာ … အိမျခှေးပါဆို .. ထိုးစရာလိုလို့လား ..? ပီးတော့ အဲ့တုနျးက မအားဘူး ဘယျသူမှ ”
ခုနကထကျ အသံကမာလာတယျ …
ဒါဆို အဲ့ အိမျခှေးကကော ခှေးရူးကာကှယျဆေးထိုးထားလား …ဆိုတော့..“မထိုးထားပါဘူး “တဲ့ …ခု အဲ့ခှေးကော ဆိုတော့ .. အဲ့ကိုကျတဲ့နကေ့တညျးက မောငျးထုတျလိုကျတာ ဘယျရောကျသှားမှနျးတောငျ မသိပါဘူး .. တဲ့ …History နဲ့ Examination အရတော့ ကတြေျာ့ Diagnosis ကတော့ Rabies (ခှေးရူးပွနျရောဂါ) ပါပဲ …
ဒါနဲ့ပဲ သူတို့ကို ရောဂါအကွောငျး သခြောရှငျးပွတယျ … လကျမခံခငျြသလိုလို ပုံစံပါပဲ …လိုအပျတဲ့ထိုးဆေး သောကျဆေးတှပေေးပီး ဆေးရုံတငျထားလိုကျတယျ … သခြောလဲ monitoring လုပျထားတယျ …
ညနေ ဆေးထိုးပီး နာရီဝကျကြျောအကွာမှာ ကလေးက ထဖောကျလာတယျဆိုပီး စောတဒ တကျပါလရေော ….. ( အမှနျတော့ ဆေးနဲ့မဆိုငျပဲ ရောဂါအရ ထဖောကျတာမြိုး )
ခကျြခငျြး သှားကွညျ့တော့ ကလေးက Gasping ရနပေီ … Resuscitation (သကျကယျ) လုပျပမေယျ့ နာရီဝကျကြျော ကွာတဲ့ထိ ပွနျကောငျးမလာတော့ပါဘူး …နောကျဆုံး Expired (ဆုံး) သှားတယျ …အဲ့မှာ စပွသနာ ရှာတော့တာပဲ …
ကလေး အမကေ သူ့ကလေးကို သူနာပွုဆရာမတှကေ ဆေးထိုးသတျပသျပါတယျဆိုပီး တဆေးရုံလုံး ကွားအောငျ ထပျခါထပျခါ အျောပီး ငိုပါလရေော …
ခှေးကိုကျတုနျးက ခှေးရူးကာကှယျဆေးထိုးဖို့ မအားဘူးဆိုတဲ့သူတှဆေီက လူအယောကျ ၂၀ လောကျရောကျလာတယျ ..တုတျတှတေောငျပါတယျ …ကလေးကို ဆေးထိုးသတျတာ .. ကလေးကို ဆေးထိုးသတျတာ …အသံတှေ ပဲ့တငျထပျနတေယျ …
ဆရာမလေးတှခေမြာ ကွောကျလို့ မကျြရညျတှတေောငျကတြယျ …အခနျးထဲ ပွေးဝငျကွတယျ …ခုနက လူတှကေ ကတြေျာ့ဆီကို ဝိုငျးလာတယျ … ပူလို့ခြှေးထှကျတာရော .. ခုနက သူတို့ကလေးကို CPR နာရီဝကျကြျောလုပျပေးထားတာရောနဲ့ လူက ခြှေးတှေ ရှဲနပေီးသား … သူတို့အဲ့လို ဝိုငျးလာတော့ ပိုဆိုး .. ရခြေိုးထားသလား မှတျရတယျ …ဆေးထိုးတဲ့ ဆရာမကို ထုတျပေး … အဲ့ဆရာမ ကတြျောတို့ကလေးကို သတျတာတဲ့ …
ကတြျောလဲ အတတျနိုငျဆုံး ထိနျးပွောတယျ … ဒါက ဆေး နဲ့ မဆိုငျကွောငျး …ကလေးမှာ ဆေးမတညျ့တဲ့ လက်ခဏာတှေ တဈခုမှ မရှိကွောငျး…ပီးတော့ အဓိက ဒီဆေးတှေ ထိုးခိုငျးသောကျခိုငျးတာဟာ ကတြျောပဲဖွဈပီး ဆရာမနဲ့ လုံးဝမဆိုငျကွောငျး … ကလေးက
ခှေးရူးရောဂါကွောငျ့သာ ဒီလိုဖွဈရကွောငျး အကွိမျကွိမျရှငျးပွမှ အနညျးငယျ ငွိမျသှားတယျ … ဒါတောငျ အဲ့ လူုအုပျထဲကတောကျတခေါကျခေါကျအသံတှေ … အဓိပ်ပာယျကို မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အသံတှေ ကွားနရေတုနျး …နောကျတော့ ရှာက ဘုနျးကွီးတှပေါရောကျလာတယျ … ကံကောငျးတာက ဘုနျးကွီးတှေ ပွသနာ လာရှာတာမဟုတျပဲ လာတရားခပြေးတာမို့ အခွအေနေ တျောတျောတညျငွိမျသှားတယျ …ကလေးရဲ့အမကေတော့ သူ့သမီးကို ဆရာမက ဆေးထိုးသတျပါတယျဆိုပီး တဖှဖှ …ကတြျောလဲ လုပျစရာရှိတာတှဆေကျလုပျ … နောကျ လူနာတဈယောကျ(ကိုယျဝနျ ၅ လ နဲ့ အဆိပျ သောကျ
သတေဲ့လူနာ )ကို ထပျကွညျ့ပေးနရေတာမို့ သူုတို့တှဘေယျအခြိနျ ပွနျသှားကွမှနျးတော့ မသိလိုကျဘူး …စိတျထဲမှာတော့တှေးမိတယျ …ငယျငယျက သငျခဲ့ရဖူးတဲ့ ပုံပွငျ too much knowledge maketh fools ကမှတျောသေးတယျ …a little knowledge ကမှ တကယျ့ကို ကွောကျစရာ ဆိုတာပါပဲ …(အိမျခှေးကိုကျကိုကျ ကွောငျကိုကျကိုကျ ၂၄ နာရီအတှငျး ကာကှယျဆေးထိုးကွပါဗြာ )
Page7of 1,505